14 "iyo 16" MacBook Pros oo wata Apple Silicon iyo M2 si loo bilaabo Xagaagan | Waxaan ka socdaa mac
14 "iyo 16" MacBook Faa'iidooyinka leh Apple Silicon iyo M2 si loo bilaabo Xagaagan
Xanta cusub ee soo socota. Laakiin kaliya maahan xanta. Waxaan ka wada hadalnay suurtagalnimada in Apple ay soo saarto 14-inch iyo 16-inch oo ah MacBook Pros oo ay la socdaan Apple Silicon iyo M2 chip. Taasi waa, dib-u-habeynta loo yaqaan 'Macbook Pro' oo leh 10 diirimaad ayaa noqon doonta la heli karo xagaagan. Taasi uguyaraan waa waxa ay tiraahdo Mark Gurmann, falanqeeyaha caanka ah ee tikniyoolajiyadda Apple oo wax u qora Bloomberg oo ka mid ah wargeysyada kale.
Apple waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto qaabab cusub oo 14-inch iyo 16-inch ah oo loo yaqaan 'MacBook Pro' oo leh is-dhexgal wanaagsan oo M1 ah horaantii xagaagan, sida uu sheegay Mark Gurman oo Bloomberg ka tirsan.. Chip cusub ayaa la sheegay inuu ku jiro processor ka 10 udub dhexaad leh sideed geesood oo waxqabad sare leh iyo laba koronto-hoose, oo leh 16- ama 32-core GPU xulashooyin ah. Mark wuxuu sheegay in jiilka soo socda ee Apple Silicon chip uu sidoo kale taageeri doono ilaa 64GB xusuusta marka loo eego tan ugu badan ee hadda jirta oo ah 16GB. Tani waxay la jaanqaadi doontaa 16-inch oo Intel-ku-saleysan MacBook Pro, kaas oo lagu heli karo illaa 64GB oo RAM ah. Qalabka cusub ayaa sidoo kale la sheegay inuu taageerayo dekado Thunderbolt dheeraad ah oo loogu talagalay isku xirnaanta ballaarinta.
Warbixinnadii hore, khabiirka Bloomberg wuxuu ku sheegay in moodooyinka cusub ee MacBook Pro ay soo bandhigi doonaan a dib loo qaabeeyey jiifku oo lagu daray dekedo badan, oo ay ku jiraan hal HDMI, Afyare kaarka SD (mar labaad) iyo fiilada magnetic-ka ee kuxiran Magnetic (Sidoo kale markale).
Iyagu maahan kaliya noocyada Mac ee ay Apple ka shaqeyn laheyd. Laakiin dabcan moodooyinkan 14 iyo 16 inji ah iyagu waa kuwa loogu jecel yahay celceliska isticmaalaha. Iyagu waa kuwa aad u kala badan oo waliba awood badan. Sidaa darteed waa mid ka mid ah iibsiyada ugu fiican haddii aad rabto laptop, dabcan. Waan sugi doonaa inta ay jiraan waxyaabo kale oo xaqiijin kara xantaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » 14 "iyo 16" MacBook Faa'iidooyinka leh Apple Silicon iyo M2 si loo bilaabo Xagaagan
IMac-kan cusub wuxuu keenayaa istiikarada Apple si ay ugu dhigmaan midabka qalabka
Markii ugu horreysay "Unboxings" ee iMac-ka cusub ee 24-inji ah ayaa soo muuqda